Soo dejisan MediaMonkey 4.1.14.1813 – Vessoft
Soo dejisan MediaMonkey
MediaMonkey – software ah inuu u ciyaaro kuwan raadkaygay maqal ah oo maamuli ururinta ee files warbaahinta ku haboon. Software waxa ku jira tiro badan oo ah qalab loogu talagalay maaraynta habboon ee maktabadda faylasha iyo Playlists. MediaMonkey u saamaxaaya in ay badalo files warbaahinta qaabab kala duwan, xaalkaa macluumaadka iyaga ku saabsan oo gubi in disk. Software ayaa macaamila ciyaartoyda MP3 iyo qalabka mobile taas oo ku salaysan yihiin nidaamka hawlgalka Android ama macruufka. MediaMonkey sidoo kale u saamaxaaya in ay baadhaan macluumaadka ku yaal adeegyada caanka ah sida Google, Amazon iyo Wikipedia.
Maamulka haboon faylasha maktabada
The set oo ah qalab si ay ula shaqeeyaan files
.Wadashaqayntaas La qalab kala duwan
Comments on MediaMonkey:
MediaMonkey Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... ALLPlayer 6.9
English, Français, Español, Deutsch... Spotify 1.0.38.171
Extensions software The si loo ballaariyo fursadaha ka mid ah daalacashada casriga ah iyo web-codsiyada. software The isku daraa content multimedia iyo isdhexgalidda madal software kaliya.